ကားမှာပါတဲ့ သာမိုစတတ်ကို ဖြုတ်ပစ်လိုက်လို့ရပါသလား?
အခုလက်ရှိကားလောကမှာ၊ အထူးသဖြင့် တက္ကစီမောင်းသူတွေအကြားမှာ ကြားကြားနေရလေ့ရှိတဲ့ အယူအဆအမှားတွေထဲက တစ်ခုကတော့
“ကားမှာပါတဲ့ သာမိုစတတ်တွေက မလိုပါဘူး။ ဒီကောင်တွေပါရင် ကား Heat တက်တယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံက အေးတဲ့နိုင်ငံမို့ထည့်ထားတာ၊ မြန်မာနိုင်ငံက ပူလို့ဒီကောင်တွေမလိုပါဘူး။ ဖြုတ်ထားလို့ရပါတယ်။ ဖြုတ်ထားလည်း ဘာမှမထူးပါဘူး။”
ဆိုတာတွေ တော်တော်များများတွေ့လာရလို့ ကားမောင်းသူတွေနဲ့ ဝပ်ရှော့ဆရာတွေအကြား အမှားကြာ အမှန်မဖြစ်ရအောင် သာမိုစတတ်နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေကို သိပ္ပံနည်းကျတင်ပြပေးပါမယ်။
သာမိုစတတ် (Thermostat) ဆိုတာဘာလဲ?
သာမိုစတတ် (Thermostat) ဆိုတာ ကျနော်တို့လက်ရှိကားလောကမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ Internal Combustion Engine ဆိုတဲ့ အတွင်းပိုင်းမီးလောင်ပေါက်ကွဲပြီး စွမ်းအင်ရတဲ့ အင်ဂျင်တွေရဲ့ အအေးပေးစနစ်ထဲက အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ။ ကျနော်တို့ လက်ရှိကားလောကမှာအသုံးပြုနေတဲ့ ကားတိုင်းရဲ့ အင်ဂျင်အတွင်းပိုင်းမီးလောင်ခန်းထဲမှာ လောင်စာဆီရယ်၊ လေရယ် ရောနှောမီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီး အင်ဂျင်လည်ပတ်ရတာမို့ အင်ဂျင်ဟာအလွန်ပူပါတယ်။ ဒီလို ပူတဲ့အင်ဂျင်ဟာ အပူလွန်ကဲပြီး အင်ဂျင်နဲ့ အင်ဂျင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေ ပျက်စီးမသွားစေဖို့ အအေးပေးစနစ်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အင်ဂျင်ဘလောက်တုံးကြီးရဲ့ အတွင်းပိုင်းမှာကို Water Jacket ဆိုတဲ့ ရေလိုင်းပေါက်တွေထားပြီး အဲဒီထဲကနေ ရေတွေကိုလည်ပတ်စေခြင်းအားဖြင့် အင်ဂျင်အပူကိုလျော့ကျစေကာ အင်ဂျင်ကိုအပူမလွန်ကဲအောင် ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။
အင်ဂျင်အအေးပေးစနစ်အတွက် အဓိက အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကတော့
Water Pump (ရေလည်အုံ၊ ရေပန့်)
Fan Motor (ပန်ကာ)
Coolant Temperature Sensor (အအေးခံရည် အပူချိန်တိုင်း ဆန်ဆာ)
ECU (Engine Control Unit) တို့ဖြစ်ပါတယ်။
သာမိုစတတ် (Thermostat) ဆိုတာက အအေးပေးစနစ်မှာ ပါဝင်တာဖြစ်ပေမဲ့ အင်ဂျင်အေးအောင်လုပ်ပေးတဲ့ ပစ္စည်းလို့ တထစ်ချပြောလို့မရပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင် သာမိုစတတ် (Thermostat) ဆိုတာ အင်ဂျင်မပူလွန်း၊ မအေးလွန်းအောင်ထိန်းချုပ်တဲ့နေရာမှာ အဖွင့်အပိတ် ဗား (Valve) လေးအဖြစ် အလုပ်လုပ်ပေးရတာမို့လို့ပါပဲ။
သာမိုစတတ် (Thermostat) ရဲ့ အဓိက လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသိဖို့အတွက် လက်ရှိကားတွေမှာအသုံးပြုနေတဲ့ ကားတွေရဲ့အင်ဂျင်အကြောင်းကို အနည်းအကျဉ်းသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလို ကျနော်တို့ကားတွေမှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ အင်ဂျင်တွေဟာ အတွင်းပိုင်းမီးလောင်ပေါက်ကွဲပြီးမှ လည်ပတ်ကာ စွမ်းအင်ကိုရတဲ့ (Internal Combustion Engine) တွေပါ။ ဒါကြောင့်အင်ဂျင်ဟာ ပူပါတယ်။ အဲဒါကို အပူမလွန် (Overheat) မဖြစ်အောင် ထိန်းထားရသလို အရမ်းအေးမသွားအောင်လည်း ထိန်းထားရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် အင်ဂျင်ရဲ့မူလဇာတိကိုက အတွင်းပိုင်းမီးလောင်ပေါက်ကွဲရတဲ့ အင်ဂျင်မို့လို့ပါပဲ။ ဒါကြောင့် အတွင်းပိုင်းမီးလောင်နိုင်ဖို့ အင်ဂျင်ဟာ လုံလောက်တဲ့အပူချိန်တစ်ခုရှိနေရပါမယ်။ အဲဒီလိုအပူချိန်မရှိဘူးဆိုရင် အင်ဂျင်ရဲ့ မီးလောင်ခန်းအတွင်း မီးလောင်မှုဖြစ်စဉ် မဖြစ်နိုင်တာမို့ အင်ဂျင်မလည်ပတ်နိုင်တော့ပါဘူး။
ဥပမာ ပြောရမယ်ဆိုရင် အရမ်းအေးလွန်းတဲ့ ဒေသတွေမှာ ကားအင်ဂျင်စက်နှိုးရခက်ခဲတာကို ဥပမာအနေနဲ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ တခြားအနေနဲ့လည်း ဒီဇယ်အင်ဂျင်ကားတွေမှာ ကားစက်မနှိုးခင် သော့ on လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ ဒိုင်ခွက်ထဲမှာ Glow (ကြေးနန်းခွေ အလိမ်) ပုံ မီးလေးလင်းလာတာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကို Heat တိုက်တယ်လို့ အရပ်ထဲမှာခေါ်ဝေါ်ကြပြီး အင်ဂျင်မနှိုးခင် အင်ဂျင်အတွင်းထဲ မီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်တွေ လွယ်လွယ်ကူကူအလုပ်လုပ်နိုင်အောင် ကြိုတင်အပူပေးတာမျိုး လုပ်ပေးတာပါ။
ဒါကြောင့် အင်ဂျင်ဟာ ပူလွန်းလည်းမကောင်း၊ အေးလွန်းလည်းမကောင်းတဲ့အရာပါ။ ဒီတော့ အင်ဂျင်တီထွင်သူတွေက အင်ဂျင်အကြိုက်ဖြစ်အောင် မပူလွန်း၊ မအေးလွန်းတဲ့ အခြေအနေတစ်ခု ဖန်တီးဖို့လိုလာပါတယ်။ သိပ္ပံနည်းကျပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Normal Operating Temperature ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အပူချိန်တစ်ခုကို တည်ငြိမ်အောင်ထိန်းထားပြီး မပူလွန်း၊ မအေးလွန်းဘဲ အင်ဂျင်ကို လည်ပတ်စေပါတယ်။ အဲဒီမပူလွန်း၊ မအေးလွန်းတဲ့ အခြေအနေကိုဖန်တီးပေးတာကတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ အဓိက ဇာတ်ကောင် သာမိုစတတ် (Thermostat) ပါပဲ။
သာမိုစတတ် (Thermostat) ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ?
ကျနော်တို့ လက်ရှိကားတွေမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ သာမိုစတတ် (Thermostat) တွေက Wax Types ဆိုတဲ့ ဖယောင်းကို အခြေခံထားတဲ့ သာမိုစတတ် (Thermostat) တွေများပါတယ်။ ဒီ သာမိုစတတ် (Thermostat) တစ်ခုမှာ အဓိက အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေက Wax ဆိုတဲ့ ဖယောင်းထည့်ထားတဲ့ Cylinder ၊ Mainspring (အဓိက စပရင်) ၊ Secondary Spring (ဒုတိယဦးစားပေး စပရင်) နဲ့ အဖွင့်အပိတ်လုပ်ပေးတဲ့ Valve တွေပါဝင်ပါတယ်။
ကားစက်စတင်နှိုးလိုက်ပြီး အင်ဂျင်အေးနေချိန်မှာ ရေလည်အုံ (Water Pump) က အင်ဂျင်အတွင်းပိုင်းထဲက ရေတွေကိုစတင်လည်ပတ်အောင်မောင်းနှင်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အင်ဂျင်ဟာ မပူသေးတာမို့ သာမိုစတတ် (Thermostat) Mainspring နဲ့ တွဲဖက်ထားတဲ့ Main Valve က ပိတ်နေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ရေလည်အုံကနေမောင်းတဲ့ရေတွေဟာ ရေတိုင်ကီ Radiator ဆီကိုမရောက်ဘဲ သာမိုစတတ် (Thermostat) ရဲ့ Secondary Spring နဲ့ တွဲဖက်ထားတဲ့ By Pass Valve ကနေတစ်ဆင့် အင်ဂျင်အထဲကိုပဲ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ပြီး Circulation ဖြစ် လည်ပတ်နေပါတယ်။ အဲဒီလိုနဲ့ အင်ဂျင်အတွင်းမှာပဲ လည်ပတ်နေတာမို့ လည်ပတ်နေတဲ့ ရေတွေရဲ့အပူချိန်ဟာ တစ်ဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာပါတော့တယ်။
အဲဒီလိုမြင့်တက်လာရင်း အင်ဂျင်ရဲ့အပူချိန်ဟာ 90 ံC ကနေ 105 ံC အတွင်းရောက်လာတယ်ဆိုရင်ပဲ သာမိုစတတ် (Thermostat) ရဲ့ အတွင်းပိုင်း Cylinder ထဲမှာ ထည့်ထားတဲ့ ဖယောင်းသားတွေက အရည်ပျော်လာပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ Mainspring ကနေ တွန်းကန်ထွက်လာကာ Main Valve ပွင့်ပြီး By Pass Valve ကပိတ်သွားပါတယ်။ Main Valve ပွင့်သွားတာနဲ့ အရင် By Pass ကနေ အင်ဂျင်ထဲပြန်လည်နေတဲ့ အအေးခံရည်တွေဟာ ရေတိုင်ကီထဲကိုဝင်ရောက်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကိုက်ပဲ Coolant Temperature Sensor ရဲ့ အာရုံခံသတင်းပို့ပေးမှုကြောင့် Engine Control Unit ကနေ အင်ဂျင်တအားပူနေပြီ၊ အအေးပေးဖို့လိုအပ်နေပြီဆိုတာ သိတာမို့ အအေးခံဖို့ Fan Motor ပန်ကာတွေကိုဖွင့်ပေးပြီး လည်စေပါတယ်။
ဒီလိုနည်းစနစ်နဲ့ သာမိုစတတ် (Thermostat) မှာရှိတဲ့ Mainspring တွေ၊ Secondary Spring တွေကို အပိတ်အဖွင့်ကစားပေးခြင်းအားဖြင့် အင်ဂျင်ရဲ့ Normal Operating Temperature (90 ံC ကနေ 105 ံC) အတွင်းအမြဲရှိအောင် ထိန်းပေးထားတာပါ။
သာမိုစတတ် (Thermostat) တွေ ပျက်စီးသွားမယ်ဆိုရင်?
သာမိုစတတ် (Thermostat) တွေပျက်စီးသွားရင် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ပုံစံက ၂ မျိုးရှိပါတယ်။
၁။ သာမိုစတတ် (Thermostat) Main Valve ပိတ်လျက်အနေအထားအတိုင်း ပျက်စီးသွားတာ
ဒါကတော့ ကျနော်တို့ လက်ရှိကားလောကမှာ အဖြစ်များဆုံး Heat တက်တဲ့ရောဂါတစ်ခုပါ။ အပေါ်မှာ ရှင်းပြခဲ့သလိုပဲ သာမိုစတတ်ရဲ့ Main Valve ပိတ်နေမယ်ဆိုရင် အင်ဂျင်ခန်းထဲက အအေးခံရည်တွေဟာ ရေတိုင်ကီဆီကိုမရောက်နိုင်တော့ဘဲ အင်ဂျင်အတွင်းမှာပဲ ပတ်လည်နေပါမယ်။ ဒီလိုပတ်လည်နေရင်း သတ်မှတ်အပူချိန်ရောက်သော်လည်း Thermostat Main Valve က ပျက်စီးနေပြီး ပိတ်နေတာမို့ အအေးခံရည်တွေဟာ ရေတိုင်ကီဆီ မရောက်နိုင်တော့ဘဲ အင်ဂျင်အပူချိန်ဟာ တဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာပြီး နောက်ဆုံး အင်ဂျင်ထိုးရပ်တဲ့အဆင့်ထိအောင် ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအင်ဂျင်အပူချိန်မြင့်လာတာကို အလွယ်တကူသိနိုင်ဖို့ ကားမောင်းသူရဲ့ အရှေ့ကဒိုင်ခွက်ထဲမှာ အင်ဂျင်အပူချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ လက်တံလေးတွေ၊ မီးလေးတွေကို အမြဲသတိထားရမှာပါ။ သတိမမူဘဲ အင်ဂျင်အပူချိန် အလွန်အမင်းမြင့်တက် Overheat ဖြစ်ပြီး အင်ဂျင် Head ပျက်စီးတာ၊ Gasket ပျက်စီးတာ၊ အင်ဂျင်တစ်ခုလုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၂။ သာမိုစတတ် (Thermostat) Main Valve ပွင့်လျက်အနေအထားအတိုင်း ပျက်စီးသွားတာ
ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တော့ အပေါ်မှာရှင်းပြခဲ့သလိုပဲ ရေလည်အုံကနေ တွန်းလိုက်တဲ့ရေတွေဟာ ရေတိုင်ကီထဲကိုရောက် အအေးခံပြီး အင်ဂျင်ထဲကို ပြန်လည်ဝင်ရောက်ပြီးလည်ပတ်နေမှာမို့ အင်ဂျင်အပူချိန်ဟာ Normal OperatingTemperature (90 ံC ကနေ 105 ံC) ကို ရောက်ဖို့ခက်ခဲလာမှာပါ။ ဒီလို အင်ဂျင်ဟာသတ်မှတ်အပူချိန်မရှိတဲ့အတွက် မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်တွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြစ်ပေါ်စေမှာမဟုတ်ဘဲ ဆီစားများလာတာ၊ အင်ဂျင်ရဲ့ ဝန်အားလျော့ကျစေတာ၊ လေထုညစ်ညမ်းစေတဲ့ မီးခိုးငွေ့တွေ ထုတ်လွှတ်မှုများတာ အစရှိတဲ့ဆိုးကျိုးတွေကို ဖြစ်စေပါတယ်။
ဒီ သာမိုစတတ် (Thermostat) Main Valve ပွင့်လျက်အနေအထား ပျက်စီးသွားတဲ့အနေအထားက ဘာနဲ့တူသလဲဆိုရင် အပေါ်မှာ လူတော်တော်များများ မှန်တယ်လို့ယူဆနေကြတဲ့ သာမိုစတတ်ဖြုတ်ထားတဲ့ အခြေအနေနဲ့တူတူပါပဲ။
သာမိုစတတ် မပါဘဲ ဖြုတ်ထားလိုက်ရင်လည်း အင်ဂျင်ထဲကရေတွေဟာ ရေတိုင်ကီထဲကိုတိုက်ရိုက် အဆက်မပြတ်လည်ပတ်နေတာမို့ အင်ဂျင်ဟာသတ်မှတ်အပူချိန်ရောက်ဖို့ မလွယ်တော့ပါဘူး။ ရောက်ခဲ့ရင်လည်း သတ်မှတ်အပူချိန်မှာ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လည်ပတ်ဖို့ ရေရှည်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒီတော့ မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်တွေကို အနှောင့်အယှက်ပေးပြီး အပေါ်ကရောဂါတွေကိုဖြစ်စေပါတယ်။
အကျဉ်းချုပ်ထပ်ပြောရရင် သာမိုစတတ် (Thermostat) ဟာ အမြဲပိတ်နေလို့မရသလို၊ အမြဲပွင့်နေလို့ မရတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုပါ။ အမြဲပိတ်နေတာ၊ အမြဲပွင့်နေတာ ဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ ပုံမှန်သတ်မှတ်အပူချိန်လေးနဲ့ ငြိမ့်ငြိမ့်လေးရှိနေချင်တဲ့ ကားအင်ဂျင်ကို တစ်နည်းနည်းနဲ့ ဒုက္ခပေးတော့မှာပါ။
သာမိုစတတ် (Thermostat) ကို ပျက်စီးစေတဲ့ အဓိက အကြောင်းကတော့ အသစ်လဲလှယ်ခြင်းမပြုဘဲ သက်တမ်းကြာရှည်စွာ အသုံးပြုတာကြောင့် ဖြစ်နိုင်သလို အင်ဂျင်အအေးခံရည် Coolant အသုံးပြုရမဲ့ အစား ရိုးရိုးရေ ဘုံဘိုင်ရေတွေကိုအသုံးပြုတာကြောင့် သာမိုစတတ်ကို သံကြေးတက်ပျက်စီးစေပါတယ်။ ဒီလိုပျက်စီးသွားလို့ Heat တက်လာတယ်ဆိုရင် အများပြောသလို မလိုပါဘူး၊ ဖြုတ်လိုက်ရပါတယ်မလုပ်ဘဲ တပ်ဆင်ထားတဲ့ သာမိုစတတ်နဲ့ထပ်တူညီတဲ့ သာမိုစတတ်တွေကို ပြန်လည်အစားထိုးလဲလှယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရိုးရေကို အသုံးပြုနေတယ်ဆိုရင်လည်း Coolant အမည်ရတဲ့ အရည်အစိမ်း၊ အပြာ၊ အနီရောင်ရေလေးတွေကို ပြောင်းသုံးပေးရမှာပါ။ ဒါ့ထက် နောက်ပိုင်းမော်ဒယ်မြင့်ကားတွေမှာ အင်ဂျင်အပူချိန်ကိုအာရုံခံပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့ Sensor တွေ၊ Actuator တွေ များစွာပါဝင်လာတာမို့ သာမိုစတတ် မလိုအပ်ဘူးထင်လို့ ဖြုတ်လိုက်တယ်ဆို အင်ဂျင်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ လွဲမှားစေတာ၊ Engine Check မီးလင်းတာတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင် သင့်ကားအင်ဂျင် Performance ကောင်းကောင်းနဲ့လည်ပတ်နေဖို့ သတ်မှတ်အပူချိန်အတိုင်းရှိနေစေဖို့ သာမိုစတတ် (Thermostat) လို/မလို သိပ္ပံနည်းကျကျ ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်လောက်ပါပြီခင်ဗျာ။
စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေ ညီအစ်ကိုမောင်နှမအားလုံး နည်းပညာဗဟုသုတကြွယ်ဝကြပါစေ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် မော်တော်ယာဉ်ယာယီဝင်ခွင့်လက်မှတ်ဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှာ ထုတ်ပြန်